Faritra Analamanga : Manamafy ny fametrahana ny drafi-panajariana ny tany -
AccueilSongandinaFaritra Analamanga : Manamafy ny fametrahana ny drafi-panajariana ny tany
Faritra Analamanga : Manamafy ny fametrahana ny drafi-panajariana ny tany
Notanterahina omaly, tetsy amin’ny Hotel Panorama, ny atrikasa niarahan’ny Faritra Analamanga tamin’ireo kaomina eo anivony niaraka tamin’ny mpiara-miombon’antoka, ny fiaraha-miasa Alemana GIZ. Nifototra indrindra tamin’ny alalan’ny fametrahana ny drafi-panajariana ny tany eny anivon’ireo kaomina izany.
Araka izany, voalaza fa kaomina roa amin’ny 20 hanatanterahana ny tetikasa amina distrika miisa fito no efa nanaovana sy nametrahana izany drafi-panajariana ny tany izany. Mbola maro, araka izany, hoy ny tompon’andraikitra teo anivon’ny Faritra Analamanga, ny asa tsy maintsy tanterahina amin’ny fametrahana io tetikasa io.
Raha ny fanazavana hatrany, natao ny tetikasa amin’ny drafi-panajariana ny tany satria ny fampandrosoana ifotony dia miainga eny anivon’ireo kaominina tsirairay avy. Izany hoe, tsy maintsy jerena avokoa amin’ny fampandrosoana ny olona sy ny tany. Marihina fa tafiditra indrindra amin’ny politika nasionaly eo amin’ny fanajariana ny tany ity tetikasa goavana eto Analamanga ity.
Ankoatra izay, anisan’ny voaresaka amin’ity tetikasa ity ny fomba fampiasana ny tany, toa ny fanorenena, ny fambolena, sns, ary manaja tanteraka ny tontolo iainana hiadiana amin’ny fiovaovan’ny toetr’andro.
Mahakasika ny fanorenana, tsy maintsy jerena ao anatin’izany drafi-panajariana ny tany izany ny toerana ahafahana sy tsy ahafahana manorina sy mamboly, mivarotra, sns, ao amina kaominina iray, mba hifanaraka amin’ny paikadi-pampandrosoana ny tanàna. Voalaza fa anisan’ny singa iray lehibe amin’ny fampandrosoana ny fametrahana ny drafi-panajariana ny tany.
Noho izany, voalaza fa mila mahafehy izany drafi-panajariana izany ireo ben’ny tanàna mba hisorohana amin’ny fampiasana ny tany amina zavatra hafa, ka mety hahatonga loza ho an’ny mponina sy ny mpiara-belona.
Tontosa omaly, teny Mahamasina ny sorona masina lehibe notanterahin’ny mpino katolika rehetra manerana ny Nosy, izay notarihin’ny Sekreteram-panjakan’ny fiketrehana masina ao Vatican, ny Kardinaly Pietro Parolin. Fotoam-pivavahana lehibe nentina nanamarihana ny jobily volamena fankalazana ny ...Tohiny